Kuzvicheka screws zvakagadzirwa neakaomeswa kabhoni simbi kana simbi isina simbi zvinoshandiswa kusungira. Yakarongedzwa neakadzika tambo, pane maviri akajairwa marudzi eako ega ekuboora sikuru tambo: yakanaka tambo uye yakakora tambo.
Sikuruu yehuni sikuruwa inoumbwa nemusoro, shank uye yakapetwa muviri. Sezvo iyo yose sikuru isina kumisikidzwa, zvakajairika kudaidza izvi screws zvakasungwa zvakasungwa (PT). Musoro. Musoro wesikuru ndicho chikamu chine dhiraivha uye chinoonekwa sepamusoro pechikora. Mazhinji screws emiti ndeye Flat misoro.
Chipboard screws ndeyako yekuzvirovera-pfumo screws ine diki sikuru dhayamita. Inogona kushandiswa pakunyatso kunyorera sekusunga kwemachipboard enzvimbo dzakasiyana. Dzine tambo dzakakora kuti dzive nechokwadi chekugara kwakakwana kwesikuru pane chipboard pamusoro. Mazhinji emachipboard screws ari kuzvibata-ega, izvo zvinoreva kuti hapana chikonzero chegomba rekutyaira kuti risati racherwa. Inowanikwa mune isina simbi, kabhoni simbi, uye alloy simbi kutakura kwakawanda kupfeka uye kubvarura ukuwo ichiita kuti iwedzere kurwisa.
Drywall screws yakagadzirwa neakaomeswa kabhoni simbi kana simbi isina simbi inoshandiswa kumisikidza yakaomeswa kune matanda ehuni kana kuzvisimbi zvesimbi. Dzine tambo dzakadzama kupfuura mamwe marudzi e screws, izvo zvinogona kudzivirira kuti dzisabvise nyore nyore kubva kune yakaomawall.
An wedge anchor ndeye michina yemhando yekuwedzera anchor iyo ine zvikamu zvina: iyo yakamisikidzwa anchor muviri, yekuwedzera clip, nati, uye washer. Aya anchor anopa akakwirisa uye akanyatsoenderana akabata kukosha kwechero meyiki mhando yekuwedzera anchor
Kudonhedza-mukati mahinchingi echikadzi ekongiri anchor akagadzirirwa anonamira mukongiri, aya anowanzo shandiswa pamusoro pekunyorera zvikumbiro nekuti plug yemukati yeanchor inowedzera munzira ina kuti ibatise anchor yakasimba mukati megomba usati waisa tsvimbo yakasungirirwa kana bhaudhi. Inoumbwa nezvikamu zviviri: expander plug uye iyo anchor muviri.
Flat washers anoshandiswa kuwedzera inotakura pamusoro peiyo nati kana fastener musoro nekudaro ichiparadzira iyo yekunamatira simba pamusoro yakakura nzvimbo. Zvinogona kubatsira kana uchishanda nezvinhu zvakapfava uye maburi akakurisa kana asina kuenzana.
Tambo dzakazara dzakasungirirwa dzakajairika, zvinonamatira zviripo izvo zvinoshandiswa mukushandisa kwakawanda kwekuvaka. Matanda anoenderera mberi achimisikidzwa kubva kune mumwe mugumo kuenda kune mumwe uye anowanzo kunzi tsvimbo dzakazara, redi tsvimbo, TFL tsvimbo (Thread Yakazara Kureba), ATR (Yese tsvimbo tsvimbo) uye mamwe mazita akasiyana uye mazita.
Kaviri End End Stud Bolts
Double end stud stud bolts dzakasungirwa zvakasungwa zvine tambo pamativi ese maviri nechikamu chisina kuverengerwa pakati pemativi maviri akasungwa. Iwo maviri magumo ane akakwenenzverwa mapoinzi, asi kutenderera mapoinzi anogona kupihwa pane chero kana ese ari maviri magumo pasarudzo yemugadziri, Double inopera mitezo yakagadzirirwa kuti ishandiswe apo imwe yeiyo yakamisikidzwa kumagumo yakaiswa mugomba rakabatwa uye hex nati inoshandiswa pane imwe kupera kwekusungira chigadziko pamusoro pechinhu icho chipfu chakamonerwa mukati
Nhema Oxidation Hex Bolts, Yakakwira Simba Hex Bolts, Dema Kuputira Hex Bolts, Bolts, Hexagon Socket Musoro Bolts, Din6921 Flange Nuts,